माधव नेपाल पक्षले के स्पष्टिकरण देलान् ? | Safal Khabar
माधव नेपाल पक्षले के स्पष्टिकरण देलान् ?
सोमबार, ०९ चैत्र २०७७, ०८ : ४७
काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी ओली पक्षले केन्द्रीय समिति देखि संसदीय दलको बैठक समेत बहिष्कार गरिरहेका माधव नेपाल पक्षका ४ नेतालाई शनिबार स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ पार्टी हित विपरित गतिविधि गरेको आरोपमा नेपाल पक्षका नेता नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुषाललाई स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो ।
यद्यपी, स्पष्टिकरण पत्र चारै नेताले आइतबार बेलुकीसम्म प्राप्त गरेका छैनन् । उनीहरुलाई आजै स्पष्टिकरण पत्र थमाउने तयारी ओली पक्षको छ । ओलीले पार्टीमा रहेका सबै अधिकार आफुमा केन्द्रीत गरेपछि नेपाल सहितका ४ नेतालाई स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो । नेपाल पक्षले भने पत्र आफुहरुले प्राप्त नगरिसकेकोले यस विषयमा के गर्ने भन्ने अहिले निर्णय लिईसकेको छैन् ।
नेपाल पक्षका नेताहरुको आज अनौपचारिक रुपमा आन्तरिक रणनीति तय गर्न बैठक बस्दैछ । चैत ४ र ५ गते सम्पन्न भएको नेपाल र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल समुहले केपी ओली प्रवृतिका विरुद्द अन्तरसंर्घष चर्काउने र स्थानिय तहसम्मै समानान्तर संरचना बनाउने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय अनुसार महिला र युवाको राष्ट्रिय भेला गरेर समानान्तर संरचना निर्माण गरिसकेको नेपाल पक्षले भोलि काठमाडौंमै विद्यार्थीको पनि राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्दैछ ।
आफ्नो समुहका चार नेतालाई स्पष्टिकरण सोधेपछि के रणनीति बनाउने भन्नेमा नेपाल पक्षका नेताहरु आन्तरिक तयारीमा जुटदैछन् । आज दिउँसो वानेश्वरको अर्याल होटलमा उनीहरुले आन्तरिक छलफल गर्न लागेका हुन् । हामी आज आन्तरिक रुपमा छलफल गर्दैछौं । अब कसरी जाने भन्ने रणनीतिका बारेमा छलफल गर्दैछौं, नेपाल पक्षका एक स्थायी समिति सदस्यले सफलखबरसँग भने ।
ओलीले सोधेको स्पष्टिकरणका बारेमा पत्रमा कस्तो ब्यहोराको भाषा आउँछ ? कुन विषयलाई लिएर कारवाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाउन खोजिएको हो ? भन्ने विषय हेरेर मात्र थप रणनीति बनाउने यो पक्षका नेताहरुको भनाई छ । नेपाल पक्षले २०७५ जेठ २ अगाडीको अवस्थामा पार्टी फर्किनुपर्ने र फागुन २८ मा ओली पक्षले गरेको एकलौटी गुटगत निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने माग नेपाल पक्षले उठाउदैं आएको छ । तर ओलीले अब पार्टीभित्र समुहगत गुटबन्दी स्वीकार्य नुहने भन्दै नेपाल पक्षका एक एक सांसद र नेतालाई फकाउने रणनीतिमा लागेका छन् ।
#माधव नेपाल #स्पष्टिकरण